नेपालको संघीयता र अन्योलता !! | मझेरी डट कम
संघीय राज्य निर्माण बिभिन्न किसिमले बन्ने गरे तापनि दुई तरिकाबाट बनेको देखिएको छ। बिभिन्न स्वतन्त्र राज्यहरूले आपसमा सम्झौता, सन्धि गरेर संघीयता निर्माण गर्छन, यसलाई Coming Together भन्ने गरिन्छ ।
अमेरिका, अस्ट्रेलिया, स्वीजरल्याण्ड यसरी नै बनेका हुन् । सन् १७७६ मा अमेरिकामा १३ वटा राज्य मिलेर ब्रिटिश उपनिवेस विरुद्द युद्द गरी स्वतन्त्रता प्राप्त गरे । अनि १३ राज्यहरूले साझा सुरक्षाको लागि महासंघ व्यवस्था गरी बसे, पछि सन् १७८७ मा त्यहीं महासंघको बिकशित रुप नै अहिलेको संघीय अमेरिका हो । स्वीजरल्याण्ड पनि साना साना क्यानटोनहरू मिलेर बनेको हो । संघीय राज्य बन्ने दोस्रो तरिका धेरै राज्यलाई सँगै मिलाएर राख्ने हो, यसलाई Ho।ding Together भनिन्छ । भारत, स्पेन, अस्ट्रिया, बेल्जियम यही Holding Together बिधिबाट संघीयता बनेका हुन् ।
संघीय राज्यमा केन्द्रीय सरकार र राज्य सरकार हुन्छ । बिभिन्न देशमा फरक फरक नामले सम्बोधन गर्ने गरिएको छ । अमेरिका, अस्ट्रेलिया, भारतमा State, क्यानाडामा Province, स्वीजरल्याण्डमा lander, बेल्जियममा Reigon, संयुक्त अरब एमिरटेसमा Emirates भनिन्छ । संघीय देशहरूमा केन्द्रीय र राज्य सरकारको अलग अलग संविधान हुन्छ । अमेरिका, क्यानाडा, स्वीजरल्याण्ड, रुस, अस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रिकामा केन्द्रीय र राज्य प्रान्तको बेग्लै संविधान छ । तर भारत, स्पेन, मलेसिया, पाकिस्तान, बेल्जियममा केन्द्रीय संविधान नै प्रान्तको संविधान समावेस गरिएको छ । केहि संघीय देशहरूमा केन्द्रीय सरकारले बढी हस्तक्षेप गर्छ । भारत, पाकिस्तान, मलेसिया अर्ध संघात्मक देश हुन् ।
स्वायत्त संघीय राज्यहरूमा विशेष अधिकार दिएको हुन्छ, केन्द्र सरकारले राज्य सरकार भंग गर्न सक्दैन । केन्द्रीय सरकारले आवश्यक क्षेत्रमा मात्र हस्तक्षेप गर्ने गर्छ । केहि देशमा त्यहाँका आदिबासी जनतालाई सहुलियत दिन तथा खुशी बनाउन राजनीतिक संरक्षण दिएको हुन्छ । क्यानाडाको क्युबेक राज्य एक उदाहरण हो, त्यहाँ फ्रेन्च भाषीहरूको आफ्नै विदेश नीति छ । संघीय देश भित्र विशिष्ट इतिहाँस बोक्ने भू-भाग राज्यलाई विशिष्ट अधिकार दिएर फुट बिभाजनबाट रोक्न असमान संघीयवाद लागु गरेको पाइन्छ ।
नेपालको संघीय शासकीय प्रणाली स्वरूप कस्तो हुनेछ ? अमेरिका जस्तो कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली वा भारतको जस्तो संसदीय कार्यकारी प्रधानमन्त्री ? अलंकारिक राष्ट्रपति संसदबाट चुन्ने नजिर बसी सकेको अवस्थामा अब कार्यकारी प्रधानमन्त्री सिधै चुनाव जनताबाट कि संसदबाट कसरी चुन्ने सवालमा अझ पनि राजीनितिक पार्टीहरू एक मत छैनन् । साथै संघीय राज्यको मुख्यमन्त्री जनताले कि संसदबाट चुन्ने ?
संघीय राष्ट्रहरूमा अदालतको महत्वपूर्ण भूमिका छ । अमेरिका, स्वीजरल्याण्डमा अदालतहरू स्वायत्त छन् । तर भारतमा अदालत एकात्मक छ, राज्य सरकारमा चित्त नबुझेको भारतको सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सकिन्छ । यहाँ नेपालमा हरेक जातिले स्वायत्त राज्य, स्वायत्त अदालत माग गरी रहेका छन् । हरेक राज्यले प्राकृतिक स्रोत साधनलाई आफ्नै योजना अनुरुप भोग चलन हुनुपर्छ, यसमा केन्द्रीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने कुरा उठाई रहेका छन् ।
राजा पृथ्वी नारायण शाहको एकीकरण पछि नेपालको इतिहासमा खस पर्वतेहरू मात्र शासकको रुपमा उदाएपछि सिङ्गो मुलुक एकै जाति,एकै भाषीले मात्र हाली मुहाली भएको कारण अहिलेको यो संघीयताको कुरा आएको हो । विशेष गरी धेरै जाति अनि बहुभाषी भएको राष्ट्रमा सत्ता साझेदारी समन्वय गराउन संघीय राज्य प्रणाली लागु गरिएको देखिन्छ । उदाहरणको रुपमा भारतमा केन्द्रीय सरकार गान्धी खलकको पकड भए पनि अरु राज्यमा त्यहींका रैथाने स्थानीयले मुख्यमन्त्री भई सरकार चलाएका छन् । जस्तो सिक्किममा पवन चामलिंग, सन्चमान सुब्बा, नर बहादुर भण्डारी छन् । बिहारमा यादवहरू, बङ्गालमा बंगालीहरू, नागाल्याण्डमा नागाहरू मुख्यमन्त्री छन् । यी सबै जातीयता र भाषिक क्षेत्रलाई मनन गरी निर्धारण गरिएको देखिन्छ । नेपालमा खस पर्वते मात्र प्रधानमन्त्री किन हुन्छन, अरु जातिका कोही लायक छैनन् ? पंचायत कालमा १४ अंचल बनाएर १४ जना अन्चालाधिस नियुक्ति गर्दा सिधै राजाबाट मनोनित हुन्थे । अन्चालाधिस त्यो अंचलको नहुन नपर्न पनि सक्थ्यो । र ऊ त्यो अंचलको आदिवासी, रैथाने नभएको सप्रमाणहरू छन् । यही वितृष्णा अनि राजनीतिक उथल पुथलका कारण हरेक आदिवासी जनजाती अहिले स्वायत्त संघीय राज्यमा मोडिएका छन् । ता कि भोलि स्वायत्त संघीयता भएपछि खम्बुवान, लिम्बुवान, तमुवान, शेर्पा, खसान, मधेसी, मगरात, नेवा, ताम्सालिंग राज्यमा आदिवासी जनता सत्तामा पुग्न सक्छन । संघीय राज्यको विकेन्द्रीकरणले देश बिकाश निर्माणमा द्रुत गति लिन्छ । र "आफ्नो गाउँ आफै बनाअौं", जस्तै आफ्नो राज्य आफै बनाअौं अनि सत्ताको हकदार आफै बनाअौं" यो नै अहिलेको संघीय राज्य माग्नेहरूको आवाज हो ।
अन्तमा, समग्रमा संघीयता कुनै नराम्रो प्रोपोगान्डा होइन । आशा छ, संघीयताले देशलाई जातीय बिखन्डन तर्फ लाने छैन । यसलाई राम्ररी मलजल गरी मिलाएर सामुहिक रुपमा एउटा निचोडका साथ समस्याको समाधान तर्फ हाम्रा देश नेपालका राजनीतिक दल अनि नेताहरू लागेमा, अवस्य हाम्रो संघीयता अमेरिका, स्वीजरल्याण्ड, क्यानाडा जस्तो त नभनौ तर हाम्रो आफ्नै मौलिकपनको सबै जनजाति आदिवासीलाई समेटेर अझ विशिष्ट किसिमको संघीय गणतन्त्र प्रादुर्भाव गर्न सकिन्छ ।
*** "छलफल र बहसको लागि खुला" ***
यो लेखको आशय नेपाल संघीयतामा जाने घोषणा गरी सकेको परिप्रेक्ष्यमा अब कसरी संघीयतामा जाने भनेर बहसको लागि .....यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेको हो । तपाईहरू कमेन्ट गर्न डराउनु पर्दैन, कसैले संघीयता विरोधी वा संघीयता समर्थक भन्दैमा आफ्नो मनमा लागेको कुरा लुकाउनु हुदैन, प्रजातन्त्रमा वाक स्वतन्त्रता हुन्छ ।
बीपी कोइराला र राजा वीरेन्द्र
मलाई छोडी मेरो छायाँ
मोबाइलहरू सबै जलाइयो
टट्टु चढेर छट्टु